बुधबार, पुस २९, २०७७ रुपिन्द्र प्रभावी
पोखरा । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् । उनले ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध जनयुद्धका अभियन्ताहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जनयुद्धका सहिद विजय ढकालको १६ औँ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा पोखरामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा जनयुद्धका नेतृत्वकर्तामध्ये एक डा. भट्टराईले जनयुद्ध ऐतिहासिक आवश्यकताले जन्माएको सही आन्दोलन भएको दोहोर्‍याएका छन् । उनले जनयुद्धजस्तो महान् प्रयत्नबाट प्राप्त उपलब्धीहरु क्रमशः खतरामा पर्दै गएको बताए । विश्वकै कम्युनिस्ट इतिहासमा भेनेजुयला र नेपालको जनयुद्ध मौलिक भनेर इतिहासकारहरुले लेखेका भन्दै जनयुद्धप्रति आफूलाई गौरव लाग्ने भट्टराईको भनाइ थियो । आफूलाई कतिपयले बाटो छाडेको भन्ने गरेकोमा टिप्पणी गर्दै उनले कसले बाटो छोडेको हो भन्ने कुराको चर्चा लामो हुने आशय व्यक्त गरे ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले जनयुद्धका अभियन्ताहरु मिलेर जनयुद्धको न्यायपूर्ण इतिहास लेख्नुपर्नेमा जोड दिए । इतिहास लेखनका लागि वस्तुसङ्गत र पूर्वाग्रहबिना अहिले जुनजुन समूहमा भए पनि हिजोका जनयुद्धका सहभागीहरुलाई समेटेर टिम बनाएर अघि बढ्ने प्रस्तावसमेत उनले राखे । इतिहासलाई बिर्सेर भविष्य निर्माण गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । सबै सहिदहरुलाई उत्तिकै सम्मान गर्दा गर्दै पनि विजय ढकाल विशेष सम्मानयोग्य प्रतिभाका रुपमा आफूले लिने गरेको भट्टराईले चर्चा गरे ।
विजय ढकाल सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव भीम रानाभाटले गरेका थिए । विजय ढकाल जनयुद्धका सहिद हुन् । उनको कास्कीको साम्मीमैदानमा तत्कालीन राज्यका तर्फबाट हत्या गरिएको थियो ।
बुधबार, पुस २९, २०७७, २०:१७:००
शनिबार, माघ ३, २०७७ रुपिन्द्र प्रभावी
मंगलबार, पुस २८, २०७७ रुपिन्द्र प्रभावी